Yile ndlela umculo uyichaphazela ngayo intlanzi, uneziphi iimpembelelo kubo? | Ngeentlanzi
Xa siqala ukuba neentlanzi kwaye sinomdla kwihlabathi liphela le-aquarium, siyazibuza ukuba sibeka umculo ongxolayo, unokuchaphazela iintlanzi zethu. Zininzi izifundo zesayensi eziphande ifuthe lomculo kunye nendlela umculo ozichaphazela ngayo iintlanzi.
Umculo kunye nengxolo ziyichaphazela njani intlanzi yakho? Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into.
1 Umculo wentlanzi
2 Izifundo zesayensi malunga nendlela umculo ozichaphazela ngayo iintlanzi
3 Iziphumo zonxibelelwano kunye nokutya
4 Iziphumo zexesha elide zomculo kunye neengcebiso
Xa sithetha ngazo umculo, Akukho mathandabuzo ukuba sifumana umfanekiso wezityalo ezikhula phantse ngaphandle kolawulo lokonwaba kwazo. Ngokuqinisekileyo bakwacebisa ukuba ubeke umculo kwiintyatyambo zakho ukuze zibesempilweni ngokupheleleyo. Umbuzo ngowokuba kuya kwenzeka okufanayo kwintlanzi. Kucacile ewe.
Xa sithetha ngeentlanzi nangomculo, kuyacaca ukuba eyokuqala iyachaphazeleka yile yokugqibela, ke kuyacaca ukuba, ukuba siyazibeka umculo olungileyo, sinokuqhubeka nokukhuthaza indlela yabo yokuphila kunye nendlela abahlangabezana ngayo nobomi babo obufutshane. Singaneengxaki ezingaphezulu kwesinye kodwa, xa sizisombulule, zonke ziya kuba lula.
Ngapha koko, sinokukuxelela ukuba uzame ukuzibeka Umculo weklasikhi, kuba isitayile esihlaziyiweyo esiqinisekileyo ukuba siya kukunceda, ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci. Sikwakuxelela ukuba ungazama iintlobo ezininzi de ufumane eyona ichanekileyo. Uyakwazi ukuqiniseka ukuba ufumene eyona kanye xa isimo sakhe sengqondo sitshintsha ngokupheleleyo.
Alithandabuzeki elokuba umculo ubaluleke kakhulu. Ayisiyiyo kuphela kubukumkani bezilwanyana, kodwa nakwindalo, ngokubanzi. Ungazivavanya. Inkqubo ye- ziphumo ziya kuba nomtsalane ngokwenene.
Sele uyazi ukuba zikhona Iindidi ezininzi umculo, ke kuya kufuneka kuphela ukuba uphande ukuze ufumane eyona ilungele iimfuno zakho. Kungekudala okanye kamva uya kuba ulungile.
Izifundo zesayensi malunga nendlela umculo ozichaphazela ngayo iintlanzi
Oososayensi baye baqhuba uphando olwahlukeneyo olubonisa indlela ingxolo eyinkathazo enokuzichaphazela ngayo iintlanzi. Ke ngoko, kunokutsalwa ngokulula ukuba kuyakubakho iintlobo ezithile zomculo eziya kuchaphazela kakubi uxinzelelo lwezi zilwanyana. Kufuneka siqwalasele nomthamo esimamela kuwo umculo. Ayifani nokumamela umculo ngevolumu ephantsi kunokuba nesithethi esineebhasi kunye nevolumu epheleleyo.
Ngokukodwa, olunye uphononongo lwenziwe apho kubonwe ukuba iintlanzi zibenobunzima njani ekufumaneni ukutya ngokwaneleyo kulwelo. Oososayensi bajonge ukufumanisa ukuba ingaba kunjalo Ingxolo enkulu yayinokuba neziphumo ezibi. Izama nokwazi ukuba ngaba ezi ziphumo zibi zenzeka kwixesha elifutshane okanye elide. Kubalulekile ukuba wazi ukuba iziphumo ezingathandekiyo zomculo zinokuphazamisa kuphela ngexesha lesandi esiphezulu okanye zichaphazele ixesha elide. Oku kunokuba sisigqibo xa kuziwa ekubeni neentlanzi ekhaya.
Sele kuqinisekisiwe ukuba Amagagasi ahlukeneyo kunye nengxolo evela ekuthumeleni nasekuxhaphazeni ioyile zichaphazela inani elikhulu leentlanzi. Kungenxa yokuba basebenzisa iindlela zonxibelelwano ezahlukeneyo nezethu. Ingxolo evela kwizikhululo zeoyile iphazamisa unxibelelwano kunye nendlela yokuphila, ichaphazela indawo yonke yendalo kunye nohlobo ngokwalo.
Iziphumo zonxibelelwano kunye nokutya
Izifundo zesayensi zikwazile ukukuqinisekisa oko umculo ongxolayo onengxolo egqithileyo unokuphazamisa iintlanzi ekutyiseni kwaye uphazamise unxibelelwano. Masiqale sihlalutye indlela ekuphazamisa ngayo ukutya. Izazinzulu kwiYunivesithi yaseBristol e-UK zibeke ezinye izithethi phantsi kwamanzi kwi-aquarium eneentlanzi ezi-spiny. Xa ezi zandisi-lizwi zikhupha ingxolo ephezulu njengengxolo efana nabasasazi bokuzonwabisa, bayibonile indlela iintlanzi eziphazanyiswe ngayo kukutya kwazo.
Iintlanzi zazingayeki ukutya, kodwa zenza iimpazamo zokondla. Iimpazamo ezifana nokutya inkunkuma etankini endaweni yokutya. Ezi mpazamo zenzekile nokuba ingxolo ithathe imizuzwana nje eli-10. Ke siyabona ukuba umculo ongxolayo unokujika ube mbi xa usithi ungxola. Makhe sibone ukuba iphazamisa njani unxibelelwano.
Ngokophando oluthile, iingcali zebhayoloji ziye zafumanisa ukuba iintlanzi zinobudlelwane entsonkothileyo ekuhlaleni. Olunye lolu budlelwane lubandakanya ukusebenzisana ekufumaneni ukutya nasekugadeni kwezinye irhamncwa. Bayakwazi ukunxibelelana ngezandi ezinamaxesha asezantsi ezinje ngonqakrazo, iinyembezi, ukubhomboloza kunye nokuduma kwabantu abafuna izixhobo ezizodwa ukuze beve. Zizandi ezinamaxesha asezantsi kangangokuba iindlebe zomntu azikwazi kuzithatha.
Nangona ulwandle luyindawo enengxolo, iingcali zebhayoloji zifumanise ukuba unxibelelwano lunokuphazamiseka xa umculo ungxola.
Iziphumo zexesha elide zomculo kunye neengcebiso
Sele siqinisekisile ukuba umculo ongxolayo unokuchaphazela iintlanzi ekondleni kwabo nakunxibelelwano. Siza kuhlalutya ngoku ukuba ingaba inokuchaphazela kangakanani ixesha elide. Abaphandi bayaqhubeka nokufunda iintlanzi ukumisela iziphumo zexesha elide zomculo ongxolayo. Balindele iziphumo ezinje ngokulahleka kwendlebe, izikhombisi zoxinzelelo ezinje ngokuziphatha gwenxa, njl. Zizinto ezilindelwe ngokuqinisekileyo zizinto ezinokunikwa ngengxolo eqhubekayo ngexesha.
Gcina ukhumbula ukuba ayisiyiyo kuphela intlanzi ye-aquarium enokuchaphazeleka ngengxolo. Iintlanzi kwindawo yokuhlala yendalo nazo zichanabekile kungcoliseko lwengxolo. Ukuba iintlanzi zinokuphazamiseka ekutyeni kulwandle oluvulekileyo, amarhamncwa kunye nezinye iingxaki ezinjengokusinda kweentlobo zibeka emngciphekweni.
Ezinye iingcebiso ezinikwa abanini beentlanzi kwi-aquariums kukunciphisa ingxolo ekhaya kangangoko kunokwenzeka. Abanye kwiiforamu bathi kuxhomekeke kuhlobo lwentlanzi Bothuswa yingxolo enkulu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nendlela umculo ozichaphazela ngayo iintlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Umculo uyachaphazela neentlanzi
Kukho amaxesha apho ndibeka umculo kwintlanzi yam kwaye iqala ukuhamba njenge-hyperactive, ngoko ukuba ndibeka omnye umculo kuyo iyamiswa. Ndazi njani ukuba yeyiphi oyithandayo? Ngenxa yokuphumla kwakho okanye ngenxa yokuxakeka kwakho? Enkosi